मनिषा मेडिकल निरन्तर स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुन्छ : स्वास्थ्यकर्मी / सञ्चालक दिलिप सुवेदी – Mero Mechinagar
in अन्तर्वार्ता / विचार / समीक्षा, स्थानीय समाचार, स्वास्थ्य / जीवन शैली
विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारी अझैं नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका छन्,स्वास्थ्यकर्मीहरु । जोखिम मोलेर पनि स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्य संस्थामध्ये मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित मनिषा मेडिकल तथा पोलिक्निक पनि एक हो । यसका सञ्चालक दिलिप सुवेदी हुन् । यस संस्थामा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । आज हामीसँग मेचीनगर वाड ६ र आपासका स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै समग्र कोरोना महामारीलगायतका विषयमा मेरो मेचीनगर डट कमका लागि सिएन गौतमले तयार पारेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दछौँ ।
लकडाउन खुकुलो भए पछि आजभोलि कत्तिको व्यस्त हुनुन्छ ?
अहिले पहिलाको भन्दा थोरै व्यस्तता बढेको छ । विश्वभरी फैलिएको कोविड १९ कोरोना महामारीले हाम्रो नगरलाई पनि छोएको थियो ।अझै पनि पूर्ण रुपमा हटिसकेको छैन । कोरोनाले स्वास्थ्य ,आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई असर गर्‍यो तथापि स्वास्थ सम्बन्धी सरकारले दिएको प्रोटोकल मानेर हामीले दिन सक्ने सेवा प्रदान गरिराखेका छौँ ।
मनिषा मेडिकलको स्थापना र सुरुवाती दिनमा देखिएका चुनौतीहरु के के थिए ?
वास्तवमा ,यसको इतिहास हेर्ने हो भने मेरो बुवा रत्न बहादुर सुवेदी सामान्य औषधीमूलो गर्नुहुन्थ्यो । यो बोर्डर एरिया भएको हुँदा सानो सानो औषधी गर्न पनि मान्छेहरु भारतको नक्सल जाने गर्थे । त्यही कुरा बुझेर वि.स २०४० सालतिर बुवाले यसको स्थापना गर्नुभएको थियो । त्यस बेला पसल चल्छ ,चल्दैन भन्ने तनाव थियो पछि बुवाले अरुलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनु भयो । हामीलाई पनि अधिकारी मेडिकल लगायतले सहयोग गरेका थिए। म त्यसबेला अध्ययन गर्दै थिएँ । मैले पनि बुवाको यो सेवामूलक कार्यलाई निरन्तरता दिदै वि .स २०५० सालमा सरकारको नीति नियममा रहेर आधिकारिक रुपमा मेरो नाममा मनिषा मेडिकल दर्ता गरे र पछि वि सं २०७० सालमा पोलिक्निक पनि बनाएँ ।
सुरुवाती दिनमा चुनौतीका कुरा गर्दा त्यसबेला धामीझाँक्रीमा विश्वासको गर्नेको ठूलो जमात थियो ,त्यो वाध्यता पनि थियो । नेपालमा औषधी गर्न मानिसमा जनविश्वास नभएको अवस्था थियो। त्यसपछी पनि नेपालमा औषधी बन्छ ,नेपाली औषधी हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास थिएन । हामी त्यो बेला औषधी लिन दमक धरान, विराटनगर सम्म पुग्थ्यौ । महेन्द्र राजमार्गको सानो बाटो भएर त्यसबेला चल्ने कोशी यतायात, आरती सेवा ,भाग्य रेखा बसमा बिहान गएर बेलुका फर्किन्थ्यौ । यता मेडिकलमा आउने सिकिस्त बिरामीहरुलाई त्यसबेलाको ठूलो अस्पताल लिएर जान साधन थिएन । त्यो हेरि अहिलेको अवस्था अत्यन्त सहज भएको छ ।
मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्न कत्तिको जोखिम छ ?
धेरै नै जोखिम छ । हामीले चेक गरेपछि दिएको औषधी बिरामीले सहि तरिकाले सेवन गर्‍यो भने ठीक छ तर उसले गडबडी गर्‍यो भने त्यसको अपजस हामीमाथि आउँछ । फेरि कतिपयलाई सहि औषधीले पनि रिएक्सन गर्न सक्छ। कुनै बेला सामान्य टिटनासका सुई हान्न आएका बिरामी सक भएर ढल्ने पनि हुन्छन् त्यो बेला हार्टअट्याकको सम्भावना हुन सक्छ । मानवीय क्षति हुने खतरा पनि हुन्छ ।
अर्को कुरा हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छे हौं । यहाँ विभिन्न रोग लिएर आएका बिरामी हुन्छन् ।त्यसको हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले रोग लुकाएर पनि आएका हुन्छन् । हामीमा त्यसको संक्रमण हुनसक्छ । अब यही कोरोन महामारीलाई हेर्नुस त कती जोखिम छ हामीलाई । हुन त काम गरिरहदा जस पाइने नाफामूलक नै कार्य हो तर जोखिम ज्यादा छ ।
प्राय मानिसले आफूले रोजेको फिल्डमा आफ्ना सन्ततिलाई देख्न चाहन्छ, तपाईका सन्तति के गर्दैछन् ?
अवश्य । अहिले उनीहरु यहि क्षेत्रमा छन् । मेरा दुई जना छोरीहरु हुन् । ठूली छोरी मनिषा डाक्टर छिन् । अहिले उनी बिर्तामोड कोविड १९ अस्पतालमा मेडिकल अफिसरको रुपमा कार्यरत छिन् । यो मेडिकलको नाम पनि उनकै नामबाट राखेको हु । अर्की छोरी कान्छी निशा अस्ट्रेलियामा छिन् । उनी बिएन नर्सिङ गर्दैछिन् ।
तपाईं कुन कुन संस्थासग आबद्द हुनुहुन्छ ?
म शुरुबाटै सामाजिक काममा समर्पित छु । म नेपाल औषधी व्यावसाय संघ झापा जिल्ला शाखाको सल्लाहकारको रुपमा छु । नेपाल बहुउद्देशीय सहकारीको संस्थाको स्वास्थ्य संयोजकको रुपमा छु । त्यसैगरी काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षका पदमा छु । समाजिक संस्था रोटरी क्लबसँग आबद्द छु ।म सन् २०१४ /१५ को रोटरीको अध्यक्ष थिएँ । नाइट चेस क्लबको पूर्व अध्यक्ष पनि थिएँ ।
अहिले कस्ता खालका बिरीमी आउँदैछन् ?
बिरामी प्राय सिजनल हुन्छन् । यो चिसोको मौसमको समय हो । अहिले साना नानीहरू र वृद्दहरुमा रुघा ,मर्की,ज्वरो ,डाइरियाका बिरामी आउँछन् ।त्यसैगरी चोटपट लागेकाहरु पनि आउँछन् । यहाँ आउनेहरुलाई चिसोबाट बच्ने उपायका बारेमा बताइदिने गरेको छु ।
तपाईंको मेडिकलले के के सेवा प्रदान गर्दैछ ?
हामीले फार्मेसीको सेवा त विगत देखि नै दिदै आएकै हो । त्यसबाहेक प्राथमिक उपचार, एक्स -रे ,भिडियो एक्स- रे प्याथोलोजी ,फिजियो थेरापीको सेवा लगायतका छन् । त्यसैगरी विशेषज्ञ अन्तर्गत कन्सल्टेन्स फिजिसियन ,जेनेरल फिजिसियन,महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ,नाक,कान घाँटी रोग विशेषज्ञ ,छाला तथा चर्म रोग विशेष लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्छौं ।
तपाईको मेडकिलले घर गाउँ पुगेर जनताको स्वास्थ्य चेकजाँच गरेको छ ?
राम्रो प्रश्न गर्नु भो । म गएको छु । स्वास्थ्य क्लिनिक मार्फत् ,वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष ललित तामाङसँग घरघर पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिएको छु । त्यसैगरी म एनएमसीको स्वास्थ्य संयोजक भएको हुँदा जिल्लाभरीस्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छौँ । मेरो मेडिकल मा आउने डाक्टर र अरु डाक्टरसँग मगाएर पनि स्वास्थ्य चेक अप र औषधी वितरण गर्‍यौ । मैले गर्ने सहयोगमा चाहि मिडिकल रेप्रेजेन्टेटिभहरुबाट प्राप्त भएको औषधी सङ्कलन गरेर राख्छौं । ३,४ महिना पछि नजिकै रहेको काँकरभिट्टा स्वास्थ्य चौकीमा लगेर गरीब असाहयहरुलाई वितरण गरिदिनु भनेर हस्तान्तरण गर्ने गरेका छौं ।
कतिपय मेडिकलले लागु औषध कारोबार र दुर्व्यसनी बढाएका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो सुनेको छु ।बिना दर्ता खोलेका मेडिकलहल अथवा अर्काकै नाममा दर्ता भएकाहरुले त्यस्तो गर्न सक्छन् । मेचीनगरभित्रका कुनै पनि मेडिकलले त्यस्तो गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । मेडीकलमा कुन कुन औषधीरु छन् भन्ने रेकर्ड औषध विभागसँग हुन्छ । यसको तालिम पनि लिएका छौँ । हामीले स्वास्थ उपचार दिन्छु भनेर प्रढ गरेका हुन्छौँ । यदि जानाजन कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यो सजायको भागिदार हुनुपर्छ ।
भविष्यको योजनाहरु के कस्ता रहेका छन् ?
यसै क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहन्छु ।सन्ततिहरु पनि यसमै छन् । मन त यस ठाउँमा ठूलो अस्पताल खोल्ने नै हो उपचार अभावमा कसैको मृत्यु नहोस् भन्ने नै तर यसमा धेरै कुरो मिल्नुपर्छ ।यो ठूलो लगानीको काम हो । हुन त अरु पनि यस ठाउँका दिग्गजहरु एक्सरसाइजमा जुट्नु भएको छ । हामी नगरपालिकालाई पनि घचघचाइरहेका छौँ । नगरपालिकाको पनि आफ्नै समस्या होलान् ।योजना बुन्दै जाने हो, कर्म गर्दै जाने अब हेर्दै जाउ कहाँ सम्म पुगिन्छ ।
अन्यमा कसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई यस ठाउँमा लामो समयदेखि साथ सहयोग गर्दै आउनु भएका यस स्थानीय ठाउँका बासिन्दा ,विभिन्न संघसंस्थामा आबद्द ,पार्टीमा आबद्द ,मेरा अग्रजहरु र जन साधारणहरुलाई मैले सधैं सम्झेको छु । अगामी दिनहरुमा पनि साथ ,सहयोग ,सुझाव सल्लाहको अपेक्षा राख्छु । र मेरो अन्तर्वार्ता लिने मेरोमेचीनगर अनलाइनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।